April 2012 | IT Sharing Network
အချိန်တိုင်း၊ အချိန်တိုင်းမှာ ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာရဲ့ windows စနစ်ထဲကို virus တွေဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းရဲ့ အများစုဟာ pen drive တွေနဲ့ တခြား removable media တွေဆီက အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ windows စနစ်ကလဲ Autoplay လို ကောင်းမွန်တဲ့ servic မျိုးလဲ ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးကတော့ အဲဒီ Autoplay servic ကို Disable လုပ်ထားတာပါပဲ။
ကဲ....သော့ပျောက်တက်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။ သော့ခက်ပြီးရင် သော့ထည့်တဲ့ ခွက်ကလေးထဲ မှတ်မှတ်ရရ ထည့်ခဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ဘူးလား.........
Adobe Photoshop CS4 Micro Edition (not portable) - 53.1MB
Adobe Photoshop CS4 Micro Edition လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... portable မဟုတ်တဲ့ အတွက် သုံးရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ် ... key,crack,patch ထည့်ပေးဖို့မလိုပါဘူး ... install လုပ်ပေးယုံပါပဲ .... အသုံးလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ် အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
The Micro Edition of PhotoShop CS4 is only 53mb, but it is the full program (not portable). It comes precracked, saving you time. The reason it is suchasmall file size is because the extra language packs, plug-ins, and other rarely used features have been completely removed. The installer has also been completely redone. Instead of that annoying 15 - 30 minute install, it only takes 30 seconds to 1 minute to install the entire program. Since most of the unused features are removed, this version of Photoshop loads fast and runs much smoother. Fully tested and working in Windows732-bit as well.
Home Page : http://helpx.adobe.com/photoshop/kb/gpu-opengl-support-photoshop-cs4.html
Window ကို USB Drive ကနေတင်ဖို့အတွက် WinToFlash လေးက usb ကို ၀င်းဒိုးခွေ အသွင်ပြောင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် ... WinToFlash လေးက ဖိုင်ဆိုက်သေးပြီး သုံးရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ် ... USB ကလည်း4GB ဆိုလုံလောက်ပါတယ် ... တချို့ CD Drive မဖတ်တော့တာတို့မျိုးဆိုရင် ဒီနည်းလေးကအသုံးဝင်ပါတယ်... အောက်မှာလည်း ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ... ဒီနည်းလေးကိုသိပြီးသားသူငယ်ချင်းတွေတော်တော်များမှာပါ ... ကျွန်တော့် blog လေးကလုပ်တာမကြာသေးတော့ မရှိသေးလို့တင်လိုက်တာပါ ...
Facebook Timeline ကို အသုံးမပြုချင်တော့တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဆော့ဝဲလေးပါ။
Computer မှာ CD/DVD Drive မပေါ်လို့ မေးထားတဲ့ အကို့အတွက် တင်ပေးတာပါ။အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ shoutcut တွေနဲ့ ပုံစံတူလိုက်ပွားတဲဗိုင်းရပ်တွေကိုသတ်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။
India က Programmer ရေးထားတာပါ။
USB Flash Drives တွေကို window xp မှာ NTFS နဲ့Format ရိုက်ကြမယ်
၁.အရင်ဆုံး usb stick ကို ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ပါ။
၂.My computer right click ထဲက Select Manage ကိုနှိပ်ပါ။
Gtalk Always Idel software က gtalk ကို ဖွင့်ထားပြီး စက်နားလူရှိရှိမရှိရှိ အမြဲတမ်းလိမ္မော်ရောင်လေး ပြောင်းပေးမဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။
ဆောက်လုပ်ရေး ဒီဇိုင်နာများ အတွက် Pythagoras CAD+GIS 12.26
Pythagoras CAD+GIS 12.26 Size: 197.8 mb
Civil B.E တန်းတက်နေတဲ့ ညီမလေး အေးနှင်းဖြူက တောင်းဆိုထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ ပိုပြီးသက်ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ land surveying, road design, city planning စတာတွေမှာ ဒီဇိုင်းထုတ်တာ၊ တွက်ချက်တာတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများလဲ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။ ပိုမိုပြည့်စုံစွာသိနိုင်အောင် မူရင်းစာညွှန်းလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေဗျာ။
Firefox မြန်ဆန်လာအောင်သုံချင်ရင် ...
Quicker operation with cookie
Sim Card Data Recovery 3.0.1.5 Incl serial number (646kb)
ဒီကောင်လေးလည်းဆောင်ထားသင့်တယ်နော် ... sim card ပျက်စေချင်လို့တော့ ဟုတ်ဘူးဗျာ ... တကယ်လို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်ခဲ့ရင် sim card ထဲက data တွေကို recovery ပြန်လုပ်လုိ့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ ... ဆောင်ထားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
Method to Use the License Files
Click on Insert Avast Pro Activation/Internet Security/or your product License File.
Give the location of avastic file provided by me below .Means download the file given below and register using that file .Enjoy
• Continuous monitoring of any attempted access to files
• Standard and extended protection mode
• Integration with Windows UAC allowing to carry out tasks requiring administrator right
• Web browser-integrated Toolbar
• Detecting hidden malicious software installed on the computer
• Direct access to detailed information about viruses and other harmful programs detected
• Scheduled updates and scans
• Heuristic detecting technologies
• Detecting of all kinds of archives
• Synchronous multithread scan of multiple files
ဒီကောင်လေးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ IP ကို ဖျောက်ပြီး ကြိုက်ရာ နိုင်ငံတွေရဲ့ IP ကိုချိန်းသုံးလို့ရပါတယ် ... Proxy ကျော်တာတို့ မြန်မာနိုင်ငံကဆို ဒေါင်းလော့မပေးတာတို့မျိုးတွေမှာ သုံးလို့ရပါတယ် ...gmail ပို့တဲ့အခါမှာလည်း fake လို့ရတယ် ... လုံခြုံရေးတစ်ခုအနေနဲ့လည်း သုံးကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ် ... install လုပ်တဲ့အခါ Firefox မှာ Plugin လေးသွင်းပေးရပါမယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
Adobe product တွေကို တင်လက်စနဲ့ အသစ်ထွက်သမျှ အကုန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေး ဘာကောင်းတယ်၊ ညာကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်လဲ သိပ်မသိလို့ စာညွှန်းမရေးတော့ပါဘူးဗျာ။ Graphic Design ၀ါသနာအိုး သူငယ်ချင်းများ ကိုယ်တိုင်ပဲ မူရင်စာညွှန်းကို ဆက်ပြီး လေ့လာလိုက်ပါလို့။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီနော့။
ဒီ ဇော်ဂျီဖောင့်လေးကတော့ ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ ဖောင့်လေးပါ။gtalk,folder name,window7အတွက်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်
။ဖောင့်လေးကို အင်စတောလုပ်ပြီးရင်တော့ restart တောင်းပါတယ်။
ဒီ USB_BOOT လေးကနဲ့ window xp,window vista,window7သုံးမျိုးစလုံးတင်လို့ရပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ အပေါ့ပါးဆုံး cd,dvd ခွေကူးတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ bကီးတွေဘာတွေလည်းထည့်မပေးရပါဘူး rom သုံးလေးလုံးလောက်ချိတ်ကူးလည်း buffer ကငြိမ်ပါတယ်။
Adobe After Effects CS6 v11.0.0.378 + crack/serial/keygen
အင်တာနက်ဆိုင်တွေကနေသုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဒေါင်ရတာ အခက်အခဲတော့ ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Home user တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Graphic Design ၀ါသနာအိုး သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။
passport ပုံလေးတွေကို အလွယ်ကူးဆုံးနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေး လုပ်ပေးပြီးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။
key တွေထည့်စရာမလိုပဲ kaspersky Internet Security ကို Activation လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးနဲ့ disk ရဲ့ အမြန်နှုန်းကို အမြင့်ပေးမဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။
Xilisoft Photo Slideshow Maker 1.0.2 Build 20120228 + crack/serial/keygen
Graphic ၀ါသနားအိုး သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး CS6 Portable အသစ်ထွက်လာတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက နာမည်ကျော်ကြားပြီး၊ သူငယ်ချင်းတို့လဲ သိပြီးသားမို့ စာညွှန်းမရေးတော့ဘူးနော်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ နဲနဲတော့ကြီးတယ်ဗျာ။ လိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်လုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။
ဒီကောင်လေးကတော့ Graphic Design ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။ စာညွှန်းရေးဖို့ လိုအပ်မယ်မထင်တာကြောင့် မရေးတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ အင်တာနက်လိုင်း အခက်အခဲတွေရှိနေလို့ လဲပါတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်သူငယ်ချင်းများ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရအောင်တော့ မူရင်းစာညွှန်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်လို့ရပါပြီ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
Kasparsky Internet Security 2012 ဒီမှာ ဒေါင်းပါ ... ဖိုက်ဆိုက် (76.42MB)
kasparsky key ထည့်နည်း ဒီမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် ...
The following list includes some of the more powerful search engines:
About - http://about.com
PCDJ DEX 2.2.4 MAC OSX Size: 16.1 MB
ကျနော်တို့ pyayblogger အဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲစည်းကာစမှာကတည်းက အားပေးလာတဲ့ အကိုတစ်ယောက်က အကြံပေးတာရော၊ တောင်းဆိုထားတာရောကြောင့် Mac Os သုံး Software တွေကိုလဲ ယခုအချိန်ကစပြီး၊ တင်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင် သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အသိပေးအပ်ပါတယ်။ ကောင်းနိုးရာရာ Software တွေကို အလျင်းသင့်သလို တင်ပေးမှာပါ။ ဒီကောင်လေးကတော့ ပုံလေးကြည့်ရုံနဲ့ သိသာပါရဲ့ဗျာ။ DJ ၀ါသနာအိုး သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။ Windows user သူငယ်ချင်းများအတွက်လဲ တင်ပေးဖူးပါတယ်။ နောက် version အသစ်ထွက်ရင်လဲ တင်ပေးပါဦးမယ်။ ဒီတခါတော့ Msc Os user များအတွက်ပေါ့နော်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
Thunderhead Engineering PyroSim 2012.1.0417 + crack/serial/keygen.
Thunderhead Engineering PyroSim 2012.1.0417 + crack/serial/keygen
သံလျင် GTC က ညီလေးတစ်ယောက် တောင်းဆိုထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးအကြောင်းတော့ ကျနော်လဲ သိပ်မသိတာကြောင့် စာညွှန်မရေးတော့ပါဘူး။ သံလျင်က ညီလေးအပါအ၀င် လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုယ်တိုင်ပဲ ၊ မူရင်းဆိုဒ်က ရတဲ့ စာညွှန်းကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
FarStone VirtualDrive Pro 14.1 Build 20111222 + crack/serial/keygenSize: 41.6 MB
ဒီကောင်လေးကတော့ အားလုံးသိပြီးသားကောင်လေးပါပဲ။ Version အသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ FarStone VirtualDrive Pro isaCD emulation utility that creates disc images, or "virtual CDs" from game and application CDs and DVDs. This enables you to run games and applications without the physical disc loaded inaCD/DVD-ROM drive.
Folder Protector 5.7.4 + crack/serial/keygen
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Folder တွေကို Password ပေးပြီး ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်လေးပါ။ အသုံးပြုရတာ တကယ်ကို လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
ဒီနည်းကတော့ Double-click ကလေးပဲ ခေါက်ပါ ပျောက်သွားပါ့မယ်။ Drive တွေ ကိုပြောတာပါ .. အောက်က code ကလေးတွေ ကိုကူးပြီးတော့ notepad ထဲမှာ ထည့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် .bat ကလေးနဲ့ save လိုက်ပါ ..
အောက်မှာပေးထားတဲ့စာသားတွေကို ကော်ပီကူးပြီး Notepad မှာ paste လိုက်ပါ။
အရင်ကလည်းတင်ပေးပြီးသားပါ ဒါကတော့ version အသစ်ပေါ့ ... Uniblue DriverScanner 2012 v4.0.7.1 ဒီ software က မိမိစက်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကို အလွယ်တကူရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး Download လုပ်ပေးနိုင်သည့် အပြင် update ပါ လုပ်လို့ရပါတယ်... ဖိုင်ဆိုက်လည်းသေးပြီး အသုံးလိုတတ်တာလေးမို့ သိမ်းထားသင့်တဲ့ software ဖြစ်ပါတယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားလိုက်ပါ
Uninstaller နောက်တစ်မျိုးပါ။ အသစ်အဆန်းလေးသုံးစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့တင်ပေးတာပါ။
Desktop က အရာများကို Backup လုပ်ပေးတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်ပါတယ်..
Desktop မှာရှိသော Icons များ၊File များ၊Background,Screen Saver စသည်တို့ ကို ဒီဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် Backup လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
မိမိရဲ့စက်ကို မိမိမရှိတဲ့အချိန် တစ်ယောက်ယောက်က သင့် Desktop setting များကို ပြင်သွားသည့်တိုင် ဒီဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် သင့်မူလက Desktop ကိုပြန်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Desktop ကို Backup မလုပ်ခင် အရင်ဆုံး သင့်စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ။
ဥပမာ-Icon size,wall paper,screen saver,arrange by name စသည်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ထားလိုက်ပါ။
USB Safely Remove 5.1.2.1183 Multilingual | 7.13 MB
မိမိရဲ့ စက်မှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ Removable drives တွေကို ဘေးကင်းလုံခြုံ စိတ်ချစွာဖြင့် ဖြုတ်နိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းပြု ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကောင်လေးပါ။ လုံလဲလုံခြုံပြီး မြန်လဲမြန်ပါတယ်ဗျာ။ Safely remove hardware icon ထက် ပိုပြီး မြန်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သူငယချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီဗျာ။
အဟောင်းတော့ အဟောင်းလေးပါပဲ။ အဲလို ဟောင်းပေမယ့် သုံးလို့ ကောင်းဆဲ ဆော့(စ်)၀ဲလေးမို့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ဆိုဒ်မှာလဲ တစ်ခါမှ မတင်ရသေးလို့ပါ။ ဒီကောင်လေးက ဘာကောင်းလဲဆိုတော့...ကိုယ့်စက်ရဲ့ အသံထွက်အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်ပြီး၊ အမျိုးစားစုံလင်တဲ့ EQ လဲပါဝင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
Macrium Reflect Professional 5.0.4522 | 28.53 MB
ဒီကောင်လေးကတော့ Window Backup လုပ်ပေးတဲ့ ကောင်လေးပါ။ ခုမှ ကွန်ပျူတာ စသုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Window Backup ဆိုတာကို စိမ်းနေမှာ စိုးလို့ အဲဒီအကြောင်းလေး နည်းနည်းတော့ ပြောဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ သိပြီးသား သူငယ်ချင်းများကတော့ နည်းနည်းလေး သည်းခံပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ Window Backup လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျုတာက Hard drisk ထဲက windows os တင်ထားတဲ့ C:\_ တစ်ခုလုံးကို တခြားလွတ်နေတဲ့ D:\_ ထဲမှာ copy ကူးထည့်ထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ system error တစ်ခုခုကြောင့် windows ပြန်တက်မလာတဲ့အခါ၊ စက်ကို windows ပြန်တင်ရမယ့် အခြေအမျိုးမှာ windows ပြန်မတင်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးပါပဲ။ ပြီးတော့ တကယ်လို့ windows ပြန်တင်ရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အသုံးပြုနေကျ program တွေကို အစကနေအဆုံး ပြန်တင်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့်.....windows backup လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် ဆော့(စ်)တွေ အစကနေအဆုံး ပြန် run ရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း ကင်းဝေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်စက်က Driver တွေကို Date Out မနေစေချင်ရင်တော့ Driver Checker 2.7.5 Datecode 27.04.2012 ကိုသာ ဆောင်ထားလိုက်ပါ
Driver Checker 2.7.5 Datecode 27.04.2012 | 7.77 MB
တင်ပေးနေကျအတိုင်း Driver Checker ဆော့(စ်)၀ဲလေး version အသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ပေးထားတဲ့ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်ပါပဲ...ကိုယ့်စက်က date out နေတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် error တက်နေတဲ့ driver တွေကို ထောက်လှမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မိမိစက်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ driver တွေကို မူရင်း ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး upgrade လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုရတာလွယ်ကူစေမယ့် interface နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာမို့ သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး လွယ်လင့်တကူ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ပိုပြီး တိတိကျကျ သိရအောင်လို့ မူရင်းစာသားလဲ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေဗျာ။
Joboshare DVD Ripper Platinum 3.3.4.0420 | 15.07 MB
DVD Ripper ကောင်းကောင်းလေး လိုအပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။ ဒီကောင်လေးသုံးပြီး DVD ခွေတွေကို Rip လုပ်နိုင်မယ့်အပြင်၊ DVD format ကနေပြီးတော့ AVI, MPEG, WMV, FLV, MKV, ASF, DivX, MP4, VOB, SWF, H.264/MPEG-4 AVC, RM, MOV, XviD, 3GP, MP3, AMR, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG, စတဲ့ Video Format နဲ့ audio ပိုင်းတွေကို အကောင်းဆုံးအရည်သွေးဖြင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် convert လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် DVD movies တွေကို rip လုပ်ရာမှာ ဖြစ်တက်တဲ့ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေး ကျဆင်းမှုမျိုးကိုလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းအပြင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရည်အသွေးမျိုးကိုလဲ လိုအပ်သလို ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ DVD Ripper ကောင်းကောင်းလေးဆိုရင် Joboshare DVD Ripper Platinum ပဲရွေးချယ်လိုက်ပေါ့...သူငယ်ချင်းတို့ရေ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။ တိတိကျကျလေး သိချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်လဲ အောက်မှာ မူရင်းစာညွှန်းထည့်ပေးထားပါတယ်။
converter ကောင်းကောင်းလေးတင်ပေးပါဆိုလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ video converter လေးပါ။ အသုံးပြုပုံကတော့
နောက်ဆုံးထွက် AntiSpyware Professional လေးးပါ မိမိစက်ထဲကို တိတ်တဆိတ်ရောက်နေ့တဲ့ spy တွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးရှင်းလင်းပေးမှာပါ။ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တာတွေ စမ်းသပ်မိသလောက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Registry ကို အကောင်းဆုံး ရှာဖွေပြီး ဖိုင်အမှားတွေနဲ့ ပျက်နေတဲ့ဖိုင်တွေကို အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။
Android 4.0 Ice Cream Sandwich OS ကို မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ တင်ပြီးသုံးရအောင်
Android 4.0 Ice Cream Sandwich OS (88MB)
Android 4.0 Ice Cream Sandwich OS ဆိုတာ smartphoneတွေ၊ Tablet တွေမှာ အဓိက အသုံးပြုတဲ့ ကမ္ဘာကျော် OS ဆိုတာ အများသိပါပဲဗျာ။ ကျနော်က ဒီကောင်လေးကို ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ လွယ်လင့်တကူ install လုပ်ပြီး စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းလေးကို တင်ပြပေးပါ့မယ်။ ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်က အလွန်လဲ လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒီကောင်လေးပေါ်ကတဆင့် အင်တာနက်အသုံးပြုရတာလဲ အလွန်ကို ပေါ့ပါးမြန်ဆန်တာတွေ့ရပါတယ်။